Luís Nani oo shaaca ka qaaday halka uu ku sii jeedo Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Yurub) 17 Juun 2020. Laacibka reer Portugal ee Luís Nani ayaa sheegay in saaxiibkiis Cristiano Ronaldo uu ku soo afjari karo xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta horyaalka MLS ee dalka Mareykanka.
Cristiano Ronaldo ayaa ku sii dhawaanaya inuu dhameysto xilli ciyaareedkiisa labaad ee kooxda Juventus, walina qandaraaskiisa waxaa uga harsan laba sano, 35 jirkan ayaa la filayaa inuu sharfo heshiiska uu kula joogo naadiga reer Talyaani.
Luís Nani ayaa aaminsan in xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Cristiano Ronaldo ay u muuqan karto inuu u safro dalka Mareykanka, si uu ugu biro horyaalka MLS, marka uu ka tago magaalada Turin.
Haddaba laacibka reer Portugal ee Luís Nani ayaa u sheegay shabakada “ESPN” kaddib wareysi uu ku bixiyay:
“Labo sano ka hor, wuxuu ii sheegay inay u badan yahay in mustaqbalkiisa ciyaareed uuku soo gabagabeynayo Mareykanka”.
“Tani 100% ma ahan wax la hubo, laakiin waxaa jirta fursad si ay taasi u dhacdo” ayuu yiri Luís Nani.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Man City iyo Arsenal ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay